Muxuu ka yiri Paul Scholes wararka lala xiriirinayo Gareth Bale inuu imaan doono Manchester United? – Gool FM
Muxuu ka yiri Paul Scholes wararka lala xiriirinayo Gareth Bale inuu imaan doono Manchester United?
Dajiye May 29, 2018
(Man United) 29 Maajo 2018. Halyayga kooxda Manchester United iyo xulka qaranka England Paul Scholes ayaa qirtay inuu jeclaan lahaa Gareth Bale oo xiran maaliyada kooxda Red Devils xili ciyaareedkansoo aadan.
Laakiin Paul Scholes ayaa u sheegay shabakada “Sky Sports” ee dalka England inuu dareensan yahay in xidiga xulka qaranka Weles uusan ka tagi doonin kooxda reer Spain ee Real Madrid.
“Uma maleenayo in ay sidaas dhici doonto, sababta kaliya uu kaga dhaqaaqi doono kooxda Real Madrid ayaa ah, haduu uu isaga raboodo inuu ka dhaqaaqo”.
“Waxaan rajeenayaa inuu yimaado kooxda Manchester United, axaan rajeenayaa in taageera kasta uu sidaas xiiseenayo, wuxuu leeyahay awood xoogan iyo hibo weyn, si wanaagsan ayuuna goolal u dhalin karaa,
“Hadii ay suuragal tahay waan soo dhaweenayaa, waana rajeenayaa in ay sidaas dhacdo, laakiin ma filayo in ay dhici doonto”.
Balel ayaa 2 gool ka dhaliyey kulankii ay Real Madrid ay guusha 3-1 ahay kaga gaartay Liverpool finalkii Champions League, xili uu kulankan ku yimid qaab badal ah, balse Zinedine Zidane ayaa ku faa’iday badalkiisa.
Ramos oo si Xun u CANAANTAY Ronaldo kaddib Ciyaartii Finalka...(Hadaladii uu ku Yiri Qolka dharbalashada oo Daaha laga rogay!!)
Kooxda Arsenal oo xidigan ka dooneysa dhigeeda dalka talyaaniga ee Juventus